Haweenka soomalida Göteborg oo codkooda la dhageysanayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
SDF Bergsjön oo dhageysanaya haweenka soomaaliyeed, foto:somaliska kvinnoförening
SDF Bergsjön lyssnar på somaliska kvinnor i Göteborg
Haweenka soomalida Göteborg oo codkooda la dhageysanayo
La daabacay tisdag 14 juli 2009 kl 13.32
Xaafadda Bergsjön oo kamid ah degmooyinka ku yaala magaalada Göteborg oo ah caasimadda labaad ee dalkan Iswidhan ayaa markii ugu horeysay waxaa codkooda dhageysan doono mas’uuliyiin ka tirsan xafiiska ceydha ama socialkontoret-ka.
Demada Bergsjön oo kamid ah degmooyinka ku yaala magaalada Göteborg oo ah caasimadda labaad ee dalkan Iswidhan ayaa markii ugu horeysay waxaa codkooda dhageysan doono mas’uuliyiin ka tirsan xafiiska ceydha ama socialkontoret-ka loo yaqaano.
Mashruuc loogu magacdaray Kvinno kraft oo marka afka soomaaliga loo badalo noqonayo ”Awooda haweenka” Haddaba maxey tahay ujeeda mashruucan iyo gunta laga leeyahay arrintan? Sureer Diini oo ah madaxa mashruucan ayaa ka waremeysa oo aan ka wareystay.
Dhinaca kale Petter Spanna oo ah isku duwaha barnaamijkan waxa uu sheegay in marka laga soo tago dhageysiga aarahda dumarkaasi ay haweenka u sameeyaan socdaalo daraasad ah oo ay ku tegi doonaan dalka dibaddisa ku tegi doonaan.
”Waxaanu dhageysan doona haweenka oo aanu eeggi doona sida aragtidooda tahay, waxaan markaasi sameyn doona socdaal daraasad oo aanu ku tagi doono dalka Ingiriiska. Halkaasi hey’adaha madaxa banaan iyo kuwo dowladaba ay la shaqeeyaan soomaalida, waxeynu markaasi sameyn doona daraasad caalamka ku xeeran sida ay ugu guuleysteen is dhexgalka”
Barnaamijkan loogu magac daray kvinno kraft ayaa wuxuu yahay mid bilowday bishii meey ee sanadkan iyadoo soconeysa tan iyo bisha oktobar ee inugu soo foo leh. Waxaana iska kaashaday xafiiska ceydha iyo hey’ada la yiraahdo Europesiska sociafonden.
Peter Spanna oo ah isku duwaha barnaamijkan waxuu ugu dambeyntii sheegay iney rajo weyni ka qabaan in qorshan noqdo mid guuleysta dhabahana u xaara in haweenkaasi ay qaarkood sameystaan meherado iyagu gaar ah ama waxa loo yaqaano eget företag si labada dhinacba ay ugu guuleystaan hadafkooda.
SDF Bergsön i Göteborg lyssnar på somaliska kvinnor